भद्रगोलमा जिग्रीले रक्षालाई भगाए, गलबन्दी गितमा जिग्री र रक्षाको यस्तो रमाईलो ! (भिडियो)
भद्रगोलमा जिग्रीले रक्षालाई भगाए, हेर्नुहोस नयाँ भाग (भिडियो)
काठमाडौ -भद्रगोल एक नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो जुन प्रत्येक शुक्रबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने गर्छ । यस कार्यक्रमको अभिनेताहरू अर्जुन घिमिरे, कुमार कट्टेल, शंकर आचार्य रहेका छन् । -चर्चित नेपाली हास्य टेली सिरियल भद्रगोल एक गाउले जिबन मा आधारित चर्चित हास्य तेली सिरियल हो यो एक कमेडी मात्र नभएर सामाजिक संदेश दिने सिरियल हो जुन मिडिया हब द्वारा निर्माण गरिएको हो ।
मसँग जिन्दगी बिताउन सक्नुपर्‍यो । मेरो पारिवारिक एवं व्यवसायिक सबै जिम्मेवारीमा एडजस्ट हुनुपर्‍यो । त्यति भए,
भैगो नि, अरू के चाहियो र ?
ढिलो सुत्ने बानी छ । सधैं जसो १–२ बजे सुत्छु । त्यसैले उठ्न ढिलो हुन्छ । अझ यो जाडोमा त बिहान १० बजेसम्म सुतिन्छ ।
खाना घरमै खानुहुन्छ कि बाहिर ?
तपाईंले बोल्ने थेगो सक्किगो नि निकै हिट भयो, यसको
आइडिया कसरी आयो ?
भद्रगोलको सुटिङ भैरहेको थियो । सुटिङ सकिनै लाग्दा अन्तिममा अन द स्पट सक्किगो नि भन्दिएछु, सबैले दामी भो भन्नुभयो । त्यो दृश्य जस्ताको तस्तै प्रसारण भयो । मिस्टेकमा बोलिएको त्यो शब्द यति हिट भयो कि, अचम्मै लाग्यो । भिडियो हेर्नुहोस